२४ चैत्र, २०७६ शीतलपाटीन्युज डटकम। 1610
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको १७औं गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन्। आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आगामी पाँच बर्षका लागि अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले आगामी गभर्नरका लागि आजै तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी,अधिकारी र पुर्वसचिव राजन खनाल थिए ।
अधिकारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट समेत रहेका अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा ३० बर्ष सेवा गरि अवकाश भएका थिए। त्यसपछि उनी सन् २०१० को डिसेम्बरमा राष्ट्र बैंकमै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भई ५ बर्षे कार्यकाल बिताएका थिए।
अधिकारीले सन् १९८९ मा बाणिज्य शास्त्रमा स्नातक गरेका छन् भने भारतबाट १९९३ मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पास भएका हुन्। त्यसबेला उनले केन्द्रीय बैंकको विभिन्न विभागमा बसेर काम गरेका थिए। उनले वित्त व्यवस्थापन, बैंकिङ अफिस, बैंक सुपरिवेक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा बसेर काम गरिसकेका छन्।
अधिकारी अघिल्लो पटक पनि गभर्नर सिफारिसमा परेका थिए। उनीसँगै डा. चिरञ्जिबी नेपाल र गोपाल काफ्ले गभर्नरमा सिफारिस भएका थिए। त्यसबेला शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई गभर्नर बनाएको थियो।नेपाल पाँच बर्षे कार्यकाल पुरा गरेर गत चैत्र ५ गते अवकाश भइसकेका छन्। गभर्नर अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगावै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सरकार अलमलमा थियो ।
चैत्र १८ गते मात्र सरकारले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको समितिमा पुर्व गभर्नरका तर्फबाट विजयनाथ भट्टराई र पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई राखेर गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो ।
single chat sites mika brzezinski and joe scarborough dating
manjam gay dating free gay chat dating sites dating gay white guys
gay dating black guys inferior free gay dating in duluth gay dating site site
gay dating utah gay dating free vegan gay dating
dating based on interests gay gay christian dating site free gay sex dating
surf gay dating site gay teens dating adults gay jewish dating website
russian scams gay dating romeo gay dating site gay trucker dating